Japana: Sary Mamoafady Ve Sa Zavakanto ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2018 17:48 GMT
Tamin'ny 19 Febroary 2008, namoaka didy ny Fitsarana Tampony Japone fa tsy nandika ny lalàna momba ny fihetsika mamoafady ilay bokin'i Robert Mapplethorpe izay voatàna tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Narita tamin'ny 1999 noho ny fiheverana hoe resaka vetaveta ny votoatiny. “Mapplethorpe” no lohatenin'ilay boky resahana, ahitàna pejy 384 misy sary miresaka lohahevitra samihafa, ny 19 amin'ireo pejy ireo misy sarina filahiana mameno pejy. Niverina avy any Etazonia niaraka tamin'ny boky i Asakai Takashi, ilay mpanonta ny “Mapplethorpe” amin'ny teny Japone, tamin'ny 1999, tamin'ny fotoana nangihazan'ny mpiandraikitra ny fadintseranana azy io. Taorian'io zava-nitranga io, naatony ny fivarotana ny dikateny japoney rehefa nahazo fampitandremana avy tamin'ny mpitandro filaminana tany Tokyo izy tamin'ny 2000, ary tato aoriana dia nentiny teo amin'ny fitsarana ny raharaha. Ho an'ny santionan'ny asan'i Mapplethorpe, jereo ny tranonkalan'ny fikambanana Robert Mapplethorpe ( Fanambaràna: sary miboridana miharihary). Japone maro mpitoraka bilaogy no nandray sy niady hevitra momba io vaovao io.
Maneho hevitra i Zmgojdha ao amin'ny “Slightly out of fortune”
Voalohany izao no nandrenesako karazan-javatra toy izany nentina teo amin'ny fitsarana.
Angamba azo foronina ho voambolana ny ” teorian'ny lalàna momba ny kalitao ara-javakanto sy ny fahavetavetàna”. Izany no antony mahatonga azy hampihomehy tahaka izao, nefa tsy azo ihodivirana ihany koa.
Ny antony nahatonga azy ireo hamoaka io didim-pitsaràna io, raha ny hevitro, dia raha ohatra ka ampahany [amin'ilay angona] no raisinao, azo atao ny manohana ny hoe mamoafady izany, fa amin'ny fomba fijery ara-javakanto dia tsy boky mamoafady io. Mampanontany tena ahy izany. Azonao lazaina fa io didim-pitsaràna [manome rariny] an'i Robert Mapplethorpe io dia vokatry ny lazany amin'ny maha-mpanakanto azy.
karubi, na afa-po tamin'ilay didim-pitsaràna aza, dia tsy mino fa ity fifanolanana miverimberina ity dia zavatra azon'ny fitsaràna vahàna.
Tokony hivoaka eny an-dalambe miaraka amin'ilay boky Mapplethorpe ireo mpitsara ao amin'ny Fitsaràna Tampony ( na tsy ny mpitsara fa ireo olona izay voakasika [amin'ity raharaha ity]) ka hanontany mpandalo 1000 eo ho eo hoe ” Hitanao fa mamoafady ve ity sary ahitàna sarina filahiana ity ?”. Nieritreritra lalina ny momba izany aho. Angamba olona 800 mahery eo ho eo no mety hilaza fa “tsy mamoafady io”, na [izy ireo] [mety hiteny ry zareo fa ] ” tsara”, na “mahaliana”. Tsy zavatra azon'ny mpitsara manana toerana ambony foronina ny fahaizana mandanjalanja, fa endrika voa-janahary ao amin'ny olon-tsotra izay mahatsapa ny fironan'ny fotoana.
Etsy ankilany, nokianin'ny sasany tamin'ireo mpitoraka bilaogy ilay didim-pitsaràna sy ireo asan'ilay mpanakanto.
Milaza i kosodatejityan1 fa sarotra aminy ny manakatra ny asan'i Mapplethrope.
そういうものを　一部とはいえ　アップの写真集にして
山川草木　動物や小鳥　自然の中に　幾らでも題材はあるはずですのにね　〜。
Na ahoana na ahoana, avy amin'ny fahatsapana iraisan'ny maro, tsy mahalala aho raha misy singa ara-javakanto ao,
saingy tsy azoko ilay psykolojia maka sary mameno pejy amin'ireny zavatra ireny ary manambatra azy ireny ho angona tahirin-tsary — eny fa na ampahany amin'ny [angona] fotsiny aza izy ireny [ireo zavatra mamoafady] — ary manao izay hahalalàna ny tenanao amin'ny alàlan'izany ianao.
Anananao ny tendrombohitra, ny renirano, ny zavamaniry, ny hazo, ny biby sy ny vorona, marobe ny lohahevitra eny amin'ny natiora.
Mihevitra aho hoe tena tsy manana na inona na inona mba hanehoany ny maha-mpanakanto azy izy.
Mpitoraka bilaogy iray hafa tena diso fanantenana tamin'ilay fanapahankevitra
Tsy azoko tanteraka mihitsy ilay didim-pitsaràna hoe zavakanto ilay sarina fitaovam-pananahana mameno pejy fa tsy sary mamoafady. Tsy isalasalàna fa manohintohina ny filaminambahoaka sy ny fotopisainana izany. Voalohany, tsy afaka mitsara ny fitsaràna hoe kanto io na sary vetaveta. Izany dia satria manana ny maha-izy azy ny tsirairay, ary noho izany dia tsy misy fenitra tsy mitanila azo anorenana ny didim-pitsaràna. Araka izany, tsy misy ny safidy fa tonga dia tsaraina fa sary mamoafady ireo sarina fitaovam-pananahana.
Noho izany, marina ny nanoheran'ny mpitsara Yukio Horigome ilay tsangan-kevitra hoe: “Sary vetaveta ny sary maneho miharihary tsara ny fitaovam-pananahana. Tsy azo ekena ny fandàvana ny maha-mamoafady azy amin'nay fampiasana ny kalitao ara-javakanto ho fialantsiny.”
Tany Japana, tsy mbola nisy mihitsy ny fiheverana fa “zavakanto ny vatan'olombelona miboridana”. Fanoherana ny fihetsika tamin'ny taonjato ‘médieval’ niainan'i Eoropa izany. Heveriko fa mamoafady ny sarina taovam-pananahana fa tiako ny an'ny vehivavy (lol). Na izany aza, manontany tena aho raha toa ka rariny ny mijery izany an-kalalahana tahaka izao. Tokony fehezina araka ny tantara, ny fomba nentim-paharazana, ny filaminambahoaka ary ny fotopisainana ny fahalalahan'ny fanehoankevitra. Inona no ilàna ny Fitsarana Antampony raha tsy azony atao ny manakana zavatra tahaka izany.